> Resource > Beddelaan > Sida loo Beddelaan Torrent in MP4
Mararka qaarkood waxaa laga yaabaa in aad ku guul darreysato inay ciyaari aad torrent video. Halkan waxaad isku dayi kartaa a video Converter xirfadeed si loogu badalo torrent in MP4 , taas oo badanaa loo isticmaalaa faylasha diiwaan by kamaradaha telefoonka ama fiidiyo, ama wadaagga video files on Internet wax badbaadiya. MP4 waxaa taageera badan barnaamijyada video iyo qalabka kala duwan ee qalabka sida iPhone, iPad, PSP, Blackberry, HTC, Madaxweyne Siilaanyo Oo iwm Waxaad dareemi kartaa si xor ah u ciyaaro daadkii meel kasta iyo waqti kasta oo ay u beddelaya MP4.
Qeybta 1: Torrent Best in MP4 Video Converter
Qeybta 2: torrent Free in Converter MP4
Qeybta 3: torrent Online in Converter MP4
Qeybta 1: Best Torrent in MP4 Video Converter for Windows / Mac (El Capitan ka mid ah)
• Beddelaan torrent video ama ka soo kasta oo fommat (HD & 3D video ka mid ah) ee tayo sare leh.
• Si fudud loogu badalo torrent video aad telefoonada Android iyo Apple waayo-aragnimo fiican loo maqli karo.
• 30X sida dhaqsaha badan ugu xawaaraha qaab beddelidda, si aynu aad u shaqeyso si karti iyo hufnaan.
• Si fudud u hesho video torrent sida Lugood ah ka bixisay mid ka mid ah ay ku daray video metadata.
• Gubashada torrent video inay DVD la wadaagto asxaabtaada shaashad weyn.
Sida loo badalo torrent in MP4
Tutorial The kooban ee hoos ku wuxuu ku salaysan yahay Windows OS. Hadii aad Mac ah, fadlan tixraac Guide User of Video Converter u Mac .
1. Ku dar files torrent
Marka la durduray in MP4 video Converter lagu rakibay, ordo barnaamijkan iyo Riix "Add Files" icon inay ku shuban ah Mpg videos aad rabto in aad si loogu badalo. Haddii aad u hesho files torrent dhow dahay, si fudud toos ah kuwaa xagga daaqaddii barnaamijka.
Riix qaab icon ee "Qaabka Output" Murayaad, iyo dooran "video MP4" ka "Qaabka"> "Video" sida qaab wax soo saarka. Haddii aad jeclaan lahaa inaan iyaga u ciyaaro aad iPhone ama PSP, waxaad dooran kartaa horena u filaayo in ka category qalabka.
1. Waxaad si xor ah uga bedelno koobin ee audio iyo video labada adigoo gujinaya ah doorasho "Settings";
2. Waxaad jar karo, dalagga, oo ku milmaan badan videos, ama ku darto watermark iyo Cinwaan iwm (Si fudud riix "Edit" in bar video iyo doortaan "Edit" option).
3. Start torrent in ay diinta ka MP4
Guji "Beddelaan" marka wax walba ayaa lagu wadaa, ka dibna MP4 in ay Converter AVI dhameysan doono beddelaad si toos ah aad u. Waxa kale oo aad la oggol yahay si ay u joojiyaan ama yara qaab beddelidda inta ay socoto.
Video Tutorial: Sida loo badalo torrent in MP4 on Windows
Qeybta 2: More fursadaha: torrent Free in MP4 Converter
# 1. Free Video Converter: Wondershare torrent Free in Converter MP4
Waa 100% free video Converter in si fudud loogu badalo torrent in MP4 for free.
1. Waxa kaliya ee taageerada diinta caadi video, 3D iyo HD video ma taageersana.
2. Version ayaa lacag la'aan ah ma taageeri diinta qalabka, sida Samsung, Apple ama HTC, iwm
3. Waxay qaadataa waqti yar oo dheeraad ah marka diinta files waaweyn sida filim.
Qeybta 3: torrent Online in MP4 Converter